Webiga Thames: astaamaha, asalka, duunyada iyo wasakheynta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 26/03/2021 15:57 | Geology
Sababtoo ah Ingriiska malaha gargaar aad loo sheego mana lahan tiro wabiyaal ah. Wabiga kaliya ee leh taako balaaran oo tan ah Wabiga Thames. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka waxayna mas'uul ka tahay kala qaybinta London laba qaybood. Intaas waxaa sii dheer, waa isha ugu weyn ee biyo laga helo dalka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan astaamaha, asalka, cilmiga dhulka iyo muhiimadda webiga Thames.
2 Isha laga helo webiga Thames
3 Fauna webiga Thames
4 Wasakhda iyo saamaynta
Waa webiga ugu weyn uguna awooda badan Ingriiska ee mara Waqooyiga Badda wuxuuna isku xiraa caasimada jasiiradda, London, iyo Badda Woqooyi. Ahaanshaha jasiirad, dhererka maalinta lama barbardhigi karo kan webiyada kale ee qaaradda, laakiin wuxuu la mid yahay dherer ahaan wabiyada kale ee Yurub. Tusaale ahaan, waxay leedahay ballaarin la mid ah tii webiga Segura ee Spain. Ilaha wuxuu ka yimid isugeynta 4 wabi: Webiga Churn, Wabiga Coln, Isis River (sidoo kale loo yaqaan Windrush River), iyo Leach River.
Asalka Wabiga Thames wuxuu ka yimid xilligii 'Pleistocene', waana sababta loo tixgeliyo webi da'yar. Waqtigaas waxay ka soo bilaabmaysay bilowgeeda Wales ilaa Clacton-on-sea. Wadadan oo dhan waxay ka gudubtay badda woqooyi oo dhan si ay u noqoto wabiga loo yaqaan 'River Rhine', maanta, webigaani wuxuu muhiimad weyn u leeyahay bixinta biyo macaan. Waqtigaas waxay ahayd mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta iyo gaadiidka u dhexeeya Westminster iyo London intii lagu jiray qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad.
Waxyaabaha xiisaha leh ee wabigan ayaa ah inuu barafoobay hal mar sanadkii 1677 tan iyo markaasna dib uma uusan sameynin markale. Sababta tani waxay ahayd in Buundada London oo dhan dib loo habeeyay oo ay yaraatay tirada iyo inta jeer ee taangiyada taasoo u saamaxday qulqulka qulqulka inuu si fudud ku socdo. Sidan oo kale, adigoon ku dhiirrigelin wabiga jiinkiisa inuu aad u dheereeyo, biyuhu dhammaadka way barafoobaan.
Isha laga helo webiga Thames
Aynu aragno meesha ay ka soo burqanayaan, wabiyada iyo moolka Webiga Thames Wadada uu maro wabiga oo dhami waxay ka tagaysaa fikrad ah halka laga keenay. Waxaa jira magaalooyin badan oo sheegta inay yihiin meesha uu wabiga ku leeyahay isha. Webiga Thames wuxuu ka yimaadaa madaxa Thames iyo Toddoba ilo. Waqtiyada ugu qabow sanadka iyo waliba kan ugu qoyan, waa waqtiga ugufiican ee lagu soo booqdo meeshan. Waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu arko webiga oo qulqulaya taalada agteeda.
Fauna webiga Thames
Wabigaan kaliya laguma aqoon inuu u kala qaybiyo England laba qaybood laakiin sidoo kale wuxuu caan ku yahay faunkiisa. Tobankii sano ee la soo dhaafay tirada naasleyda jabisay rikoor ayaa la duubay. Bulshada u heellan daryeelka iyo daryeelka xayawaannada ayaa laga diiwaan geliyey tiro ka mid ah in ka badan 2000 aragtida xoolaha ee rasmiga ah tobankii sano ee la soo dhaafay. Inta badan xayawaannada la ogaadey inay ka tirsan yihiin kooxda naasleyda ee fauna ee Webiga Thames waxay ahaayeen shaabad. Waxaa sidoo kale la sheeganayaa in hoonbarro iyo ku dhowaad 50 nibiriyada la helay.
Tirooyinkan oo dhami way ka duwan yihiin kuwii 50 sano ka hor markii beerta lagu dhawaaqay xaalad geeri ah. In kasta oo ay dadku ka fikiraan markay London u safrayaan oo ay arkayaan Wabiga Thames, waxay dhab ahaantii hayaan tiro duurjoog ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa jira xaflad sanadle ah oo lagu tirinayo swwan taas oo dhammaan shimbirahan quruxda badan lagu tiriyo iyaga iyo carruurtooda isla markaana ay si aad ah u baaraan kooxaha caafimaadka ee dhakhaatiirta xoolaha iyo saynisyahannada cudurada.
Ugaarsiga iyo uruurinta ukunta swwan waa gabi ahaanba la mamnuucay maadaama bixinta shimbirahan ay aad muhiim ugu ahayd dhamaan howlihii ay qabatay taajku intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad. Tirada shimbirahan ayaa loo hayaa dhammaan sannadaha dambe ee soo socda dhaqan ahaan iyo hab lagu hubiyo in lagu badbaadiyo noocyadan. Intaas waxaa sii dheer, waxay qurux qurux badan oo aan lasoo koobi karayn u hayaan muuqaalkan oo ka dhigaya wax dabiici ah. Yaraynta noocyada waa xaqiiqo tan iyo 200 sano ka hor waxaad arki laheyd laba laab tirada swwan ee maanta jira. Ugaarsadayaasha sharci darada ah, eeyaha iyo xitaa wasakheynta wabiga laftiisa ayaa yareeyay tirada koolada.
Wasakhda iyo saamaynta
Waa in maanka lagu hayaa inuu yahay webi mara bartamaha magaalooyinka waaweyn oo ay wasakhdu saameysey. Waxay ku jirtay xaalad aad u horumarsan oo wasakhaysan oo fidsan iyada oo 70 kiiloomitir laga soo bilaabo gobolka Gravesend ilaa qufulka Teddington ilaa muunad la qaaday 1957 ayaa go'aamisay in kalluun aanu lahayn suurtagalnimada ku noolaanshaha biyahan.
Markii aysan lahayn heer faddarayn, webiga Thames wuxuu u ahaa meel ku habboon kalluunka loo yaqaan 'Salmon' inuu ku dhasho iyo kalluun kaleba, iyo kalluumeysiga dhaqan ahaan ayaa loogu dhaqmi jiray. Markii ay magaaladu sii kordhaysay ee ay dadkuna sii kordhayeen, ayaa qaddarka qashinka lagu sheegay ee webiga la sheegay sidoo kale kordhay. Waxaa la daadiyay sanado badan, laakiin wixii ka dambeeyay 1800 runti waxay ahayd markii wasakheynta ay noqotay dhibaato culus.
Biyaha oo dhan waxay bilaabeen inay nijaasoobaan lamana daaweyn. Waxaas oo dhami waxay abuureen kordhinta bakteeriyada hakinaysa oksijiinta ku jirta biyaha taas Waa shey muhiim u ah maalinta kalluunka iyo horumarinta dhirta ku nool biyaha. Si loo yareeyo dhibaatooyinkaas, waxaa la qorsheeyey howlo dib loogu soo celinayo wabiga, iyadoo la arkay kororka warshadaha kiimikada oo kordhay, taas oo wasakhaynta sii xumaysay. Warshadaha kiimikada iyo shirkadda gaaska ayaa qashinka ku daadisay webiga ama sii xumaysay wasakheynta.
Maanta wali waa wasaqeysan tahay laakiin hadda waxay ka mid tahay wabiyada ugu nadiifsan ee magaalada dhex mara. Hawsha soo kabashada wali wey adagtahay laakiin natiijooyin ayaa durba la helay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto Wabiga Thames iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Wabiga Thames